Uluhlu lweenkampani ezilishumi ezilawula ukusetyenziswa kwehlabathi | Ezezimali
Zingaphi iimveliso zeenkampani ezahlukeneyo sisebenzisa imihla ngemihla? Ukusetyenziswa sisalathiso esiphambili kuqoqosho lwehlabathi, kwaye xa sisenza ukuthengwa sikhetha ezona sizithandayo, ezo besizisebenzisa ngonaphakade okanye zexabiso eliphantsi kwintengiso. Inyaniso kwaye eyona nto inomdla kukuba ngaphandle kokukhetha phakathi kweemveliso ezahlukeneyo, uninzi lwazo lunokuba lolwekampani enye eye yabafunxa.
Ngaphandle kokuya phambili, iinkampani ezilishumi esizifakileyo apha ngezantsi ziyahambisa kwaye zivelise ngaphezulu iimveliso ezingamawaka amabini zokusetyenziswa kwemihla ngemihla kumazwe aliqela kwihlabathi jikelele kunye ne bill ngaphezulu kweebhiliyoni zeedola ngosuku ngezi ntengiso. Iimveliso ezingatshabalaliyo, amalaphu, ucoceko, ukutya, njl njl.noko uninzi lweemarike zevenkile ezinkulu zenziwe zezinye zeenkampani ezinkulu.
Iinkampani ezilishumi ezilawula ukusetyenziswa kwemihla ngemihla ngolu hlobo lulandelayo:
Unilever: Inkampani yase-Bhritane-Datshi yamazwe aphesheya eneemveliso ezingaphezu kwama-400 kubandakanya uFrigo, Maizena, Signal, Williams, Timotei, Hellman's, Flora, Ax, Mimosín, Ligeresa, Rexona okanye Tulipán phakathi kwezinye.
CokeNangona sicinga ukuba iCoca-Cola luphawu nje, le nkampani ithengisa ngaphezulu kwama-450 kwihlabathi liphela. Ngo-2012 yayilelona gama lixabisekileyo kwihlabathi, kuphela kugqityiwe kulo nyaka iapile.
IPepsicoInkampani yaseMelika yamazwe ngamazwe yeziselo kunye ne-snack eyenziwe ngo-1890. Okwangoku inee-brand ezingama-22, nangona isasaza iimveliso ngokubambisana nezinye iinkampani.
mars-Umvelisi wehlabathi wokutya, ukutya kwezilwanyana zasekhaya kunye nezinye iimveliso zokutya. Olunye lweempawu zalo ezidumileyo ziiRoyal Canin, iWhiskas, uPedigree, iM & M's okanye iMilky Way.
UJohnson kunye noJohnson-Umenzi waseMelika wezixhobo zonyango, amayeza, iimveliso zononophelo, iziqholo kunye neemveliso zabantwana. Ineempawu ezingaphezulu kwekhulu kwaye ithengisa kumazwe angaphezu kwe-175.
Iprocter kunye neGambleIinkampani zabathengi bezizwe ngezizwe ezinobukho kumazwe angaphezu kwe-160 nangaphezulu kweempawu ezingama-300. Phakathi kweempawu zayo ezaziwayo nguGillette, uDuracell, uAriel okanye iTampax phakathi kwabanye.
okwakhiwa: Inkampani yaseMelika evelisa ukutya kwabathengi kwaye ineempawu ezingaphezulu kwe-150. Ezinye zazo ziyiTrident, Milka, Fontaneda, Oscar Mayer, Lu, Oreo, Philadelphia, Holo, Mikado, Príncipe okanye El Caserío.
uNestlé: esekwe eSwitzerland, yeyona nkampani inkulu yokutya kwezolimo emhlabeni. Ineempawu ezingama-31 eziphantsi kwayo zisasaza iimveliso ezili-146.
Jikelele iMillsUmbutho wase-US onxulumene neemveliso zokutya. Ineempawu ezingaphezulu kwekhulu, phakathi kwazo kukho i-Yoplait, Haagen-Dazs, Chex, Cheerios kunye ne-Old El Paso phakathi kwabanye.
EzikaKelloggInkampani yaseMelika yokutya okutya eneemveliso ezingaphezu kwama-65.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Apple, uphawu olubalulekileyo kwihlabathi
Umfanekiso - Ukudibana kweAlimentaire
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Iinkampani ezili-10 ezilawula ukusetyenziswa kwemihla ngemihla
UHarry Beda sitsho
Ukuthenga kubangela umhlaba
Phendula kuHarry Beda
Ngaba ukuthengisa kuyasebenza okanye kuyalandela?